Ingqungquthela ye-15 ye-gvSIG yamanye amazwe-Usuku lwe-2-iGeofumadas
Ikhaya/GvSIG/Ingqungquthela ye-15 ye-gvSIG yamanye amazwe-Usuku lwe-2
I-Geofumadas igutyungelwe ngokwakho kwiintsuku ezintathu zeentsuku ze-15as zeHlabathi ze-gvSIG eValencia. Ngosuku lwesibini iiseshoni zahlulwa zaba ziibhloko ze-4 ezinjengosuku lwangaphambili, ziqala nge-gvSIG Desktop, yonke into enxulumene neendaba nokudityaniswa kwenkqubo iboniswe apha.
Izithethi zebhlokhi yokuqala, bonke abameli bombutho we-gvSIG, bajongana nemicimbi efana
Yintoni entsha kwi-gvSIG Desktop 2.5? iqhutywa nguMario Carrera,
Umvelisi omtsha wamazwi: ukuphindaphindwa okunokwenzeka kwi-gvSIG Desktop,
Ukufumana i-gvSIG entsha yeefomathi zedesktop,
I-JasperSoft: imizekelo yokusetyenziswa kwengxelo yokuhlanganiswa koyilo kwi-desktop ye-gvSIG nguJosé Olivas.
Okulandelayo, ibhloko enomxholo ohambelana nolawulo lukaMasipala, evula lo mjikelo Mnu. Vlvaro Anguix, ngephepha leemfuno kunye nezibonelelo zokumiliselwa kwe-IDE kwinqanaba likamasipala, Obonise ukuba amaxesha amaninzi indawo yendawo / indawo ayisiyo protagonist yokuchaza iinkqubo ezithile okanye izigameko ezenzekayo, kodwa, yinxalenye ephambili yenani elikhulu ledatha eya kuthi kamva inikeze ulawulo olungcono lwangaphakathi nolwabemi.
"Iinyani esizifumana kulawulo lwasekhaya, kukuba ulwazi lukhona, kodwa ayaziwa ukuba lukhona, oko kukuthi, alukhutshwa, kwaye alaziwa, kukwabelwana kancinci kangakanani kumgangatho kamasipala. Ngokunjalo, kwiimeko ezininzi ukuphindwa kolwazi, kubaluleke kakhulu oomasipala abanaso isicwangciso sesitalato esahlukileyo, kodwa, amapolisa anakho, ucwangciso lwedolophu lusebenzisa olunye, kwaye olo lwazi lwe-cartographic apho lonke ulwazi luyekisiwe kufuneka lungafani nolunye kwaye luhlaziywe zonke ”Álvaro Anguix.
Inkcazo eqhubekayo yayiyeye ka-Eulogio Escribano, obonise indlela izixhobo ezinokuthi ziwuphelise ngayo umba wokubekwa kwabantu emhlabeni, ngomxholo wawo I-AytoSIG. Ulwakhiwo lweDatha kwiSpatial kwiiholo ezincinci zedolophu. Oomasipala abancinci abathetha ngabo uEscriptano, babhekisa kwezo ndawo zikwimimandla yasemaphandleni, ezinemali encinci kunye nezixhobo zokusebenza kwazo. Ke, sasithini isindululo, ngokusebenzisa i-gvSIG kwi-Intanethi, badibanisa uluhlu lwezinto ezisebenzayo ukuze abantu abazise ulwazi kuluntu, kufuneka bangene kwinkqubo kwaye basebenzise iqhosha ukubonisa lonke ulwazi oluceliweyo.
"Ungalufumana ukusetyenziswa kolu hlobo lwezixhobo ze-GIS koomasipala ababalulekileyo, apho baninzi abantu abajonga ulwazi, kodwa oomasipala abancinci nabo baneengxaki zabo zemihla ngemihla" I-Eulogio Escriptano -AytoSIG
Le bhloko yafikelelwa ngokuvezwa ngu-Antonio García Benlloch Lawulo Izibonelelo zeSixeko saseBétera, kunye UVicente Bou weBhunga leSixeko sase-Onda kunye noSilvia Marzal UTE Pavapark-Nunsys, oveze ityala eliphumelelayo lokusebenzisa i-IDE kwiBhunga lesiXeko sase-Onda. Eli tyala lokugqibela belilodwa, ngenxa yokuba iBhunga leSixeko sase-Onda ngaphambili lalinemizamo emibini yokusilela yokwakha i-IDE. Nangona kunjalo, sele sikuqonda ukubaluleka kwesixhobo esinjengalesi, iyafuneka ukuba iphumeze ukuphunyezwa kwayo, kunye nabanye abalinganisi bendawo, abaza kunceda ekunikezeleni ulwazi oluyimfuneko lokondla le SDI.
Ekugqibeleni, iinkxalabo zaphakanyiswa ngababekhona kunye nabathathi-nxaxheba, abathi ukuba kukho ukubakho kokumisela imeko yesiqhelo okanye ukukhuthaza ukusetyenziswa kwesihloko esithile somntu wonke. Kodwa ayisiyomfuneko yokuseka iiparameter ezithile zenkcazo okanye zolawulo lwedatha, kuba oku kungumngeni omkhulu kwabo bathatha inxaxheba kweli lizwe lolawulo lwedatha.
Ukuba ngumsebenzi onzima, ukuqonda amandla anokufumaneka ngezixhobo ezifana ne-gvSig Suite, khawufane ucinge ngokuzama ukufikelela kwisivumelwano nabo bathatha idatha, nabasemagunyeni, nabo bonke abo bathabatha inxaxheba kule nkqubo yolawulo lwedatha, ukuba nguAlvaro Anguix "Kukho iimodeli zedatha namhlanje kwaye ungazama oku kuqala, kodwa akukho mntu unokunyanzela abasemagunyeni - kule meko oomasipala - ukusebenzisa / ukuzivumelanisa nale modeli yedatha."
"Ekugqibeleni, wonke lo ngumsebenzi ekungekho mntu ulawulayo kwaye akukho mntu ubhatalayo, kwaye unzima, kodwa ukusebenzisa amagama athi" isoftware yasimahla kunye noluntu ", inokuba sisiqalo sokwenza indawo yokuthatha inxaxheba ukuze bavumelane ngezikhokelo, nangona kunjalo, kubonakala kum entsonkothileyo kakhulu ukukwazi ukuhlanganisa zonke izimvo zibe nye. Yiyo loo nto iinkampani zabucala zenza igama lokuchazwa elithile kwaye emva koko abanye abasebenzisi / amagcisa ancanyathiselwe kuyo.
Kwelinye icala, ukungazi ukuqokelelwa kwedatha kunye nokusebenzisa ngobuqhetseba kuyinto eethe-ethe, kuba amaxesha amaninzi ulwazi oluthile lwendawo luhanjiswa kwaye lubotshelelwe kwindawo yedatha, kwaye emva koko bayibuyisela isuswe ngokupheleleyo, kunye netafile yempawu eyoyikisayo ukuyisebenzisa. . Kule bhlokhi ithile, ubuthathaka amazwe anjengeSpain asenako kule meko babonakala ngokuphathwa kwedatha yolawulo kunye nokusetyenziswa kwezixhobo.
Ibhloko yentsingiselo ebhekiswe kwiNdalo kunye neNdalo esingqongileyo, iimeko apho kwakusetyenziswa idatha yasimahla-imifanekiso yasimahla yesatellite- kunye ne-gvSIG njengesixhobo solawulo lwedatha yolwazi, ngakumbi umboniso Uqikelelo lobushushu bomhlaba kwimbali ye-Landsat ye-5 ngeendlela zendlela enye yokulungiswa komoya kwindawo ye-tempisque-Bebedero. URubén Martínez (kwiDyunivesithi yaseCosta Rica). Kolu phando, indlela yokukhupha idatha yesethelayithi ibonakaliswe ngokusisiseko, kuhlolo lweendawo.
Iseshoni yokugqibela, enikezelwe kwi-Geomatics, yaqala ngentetho ka-Antonio Benlloch, owayethetha ngokusetyenziswa kwe-GIS ngoochwephesha kwi-Geomatics, ukuphononongwa imbali, kubonisa indlela iingcali ezisebenzisa ngobuchule ukusebenzisa ikhathuni ukufumana Impumelelo kwizenzo zakho. U-Benlloch uqhubeke nenkcazo yemimandla yesicelo abanolwazi lwee-geomatics abanazo, ukuqhubeka nokubonisa ukuba abazinikezelwanga kuphela kuyilo lweekhathuni.
Umbutho we-gvSIG ubonise ukuba iyaqhubeka ukubheja kwesi sizukulwana sitsha, ixhasa kwaye imema abafundi abaza kwenza uphando olubalulekileyo kwezi ntsuku. Okomhlaba jikelele Kwibhloko yeNdalo kunye neNdalo esingqongileyo, umfundi u-Ángela Casas wathatha umgangatho wathetha malunga nokusetyenziswa kwe-gvSIG kulawulo lwendalo, kunye nomxholo wayo Indawo yokugcina iMicro Iintyatyambo eSierra del Cid, ePetrer (Alicante). Kwicala lakhe, umfundi u-Andrés Martínez González, wase-Autonomous University of Mexico, ucacisile I-GINI Index ye-automation njengesixhobo sokubala kwejografi kwisoftware ye-gvSIG.
Sele silungile usuku lokugqibela lweNkomfa, ukubakho kwabathathi-nxaxheba ababebhalisile kwiworkshop yasimahla, efana
Intshayelelo kwi-gvSIG kwi-Intanethi kunye ne-Thermal Remote Sensing nge-gvSIG, apho baya kufumana isatifikethi kuMbutho we-gvSIG.
Sigxininisa ukuba ngaphambili sasiye kwiingqungquthela zophando ezifana nale, kwaye kufanelekile ukuba siyiqonde imigudu yoMbutho we-gvSIG ukubonisa ukuba ngesoftware yasimahla singenza kwaye silawula zonke iindidi zedatha ye-geospatial. Uninzi ngoku luboshwe kwisoftware yobunini, ngenxa yesizathu sokuba bengavunyelwanga ukuba babone kwaye baphonononge zonke izibonelelo zolu kunye nezinye ezingahambelaniyo; kodwa kwakhona ngenxa yokuba ukukwazi ukuthengisa oku phantsi kwendlela elungelelanisiweyo kuthetha ukuyeka izikhundla eziphezulu kwaye ugxile kukhuphiswano.